Wasiirka warfaafinta Puntland oo kormeeray idaacadaha ku yaalla Galkacyo , kadibna shir jaraa?id ku qabtay Daljir. – Radio Daljir
Wasiirka warfaafinta Puntland oo kormeeray idaacadaha ku yaalla Galkacyo , kadibna shir jaraa?id ku qabtay Daljir.
Abriil 4, 2010 12:00 b 0
Galkacyo Apr, 04 – Wasiirka warfaafinta dawladda Puntland C/xakiim Axmed Guuleed, ayaa maanta kormeer hawleed ku maray xarumaha idaacadaha ku yaalla magaalada Galkacyo isagoo kulamana la qaatay mas?uuliyiintaa idaacadaha, iyo madax kaloo ka tirsan warbaahinta.
Wasiirka oo kormeerkiisa ku tagay idaacadaha Radio Daljir, Codka Nabadda, Radio Galkacyo iyo idaacadda Xikma ayaa kormeerkiisu ku saabsanaa sidii uu ugu kuur gali-lahaa hawlaha shaqo ee warbaahinta ka hawlgasha magaalada Galkacyo gaar ahaan idaacadaha oo si gaar ah booqashadiisu ugu qotontay.
Wasiirka, ayaa sidoo kale booqday xarunta Puntland Media Resource (PMRC) oo ah xarun ka shaqaysa hawlaha warbaahinta gaar ahaan tababarrada suxufiyiinta, iyadoo xilliga wasiirku booqdayna xaruntaasi ay casharro tababar ah ku guda jireen in ka badan 30 gabdhood oo u tababarta xirfadda wariye-nimada.
Intii wasiirku uu ku jiray kormeerkiisa xarumaha warbaafinta waxaa uu la kulmay qaar ka mid ah agaasimayaasha idaacadda oo uu ka mid yahay agaasimaha idaacadda Daljir Galkacyo C/fitaax Cumar Geeddi, oo muddo kooban ay ka wada-hadleen sidii loo kordhin lahaa wada-shaqaynta wasaaradda iyo warbaahinta gaar ahaan idaacadda Daljir oo ah idaacadda ugu baaxadda weyn deegaannada Puntland.
Markii uu soo gabagaboobay kormeerkii wasiirku uuna booqday xarumaha warbaahinta, waxaa uu shir jaraa?id ku qabtay xarunta idaacadda Daljir ee magaalada Galkacyo isagoo xilliga uu shirka jaraa?id uu qabanayeyna uu waheliyey wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug Abshir Maxamed Aadan oo waftigiisa ku soo biiray gabagabadii booqashadiisa idaacadaha.
Shirka jaraa?id wasiirku waxaa uu kaga warramay booqashadii uu ku tagay xarumaha idaacadaha iyo goobaha kale ee warbaahineed, waxaana uu sheegay in uu si weyn ugu faraxsan yahay waxyaabihii uu kala kulmay goobihii warbaahinta ee uu maanta tagay, isagoo si gaar ahna u xusay idaacadda Daljir oo uu uga mahad-celiyey sidii loogu soo dhaweeyey.
C/kaxiim Axmed Guuleed wasiirka warfaafinta Puntland, waxaa uu mahad-celin kaddib si faahfaahsan uga warramay booqashadiisa, waxaana uu tilmaamay in ay ahayd mid salka ku haysa sidii ay iskula socon lahaayeen wasaaradda iyo bahda warbaahintu, isla markaana wasiir ahaan uu u kuurgalayey aqoonta iyo agabka wariyaashu ay ku shaqeeyaan.
Wasiirku, waxaa uu si cad uga hadlay kaalinta warbaahinta looga baahan yahay in ay ka ciyaarto hormarinta dalka iyo ka shaqaynta nabadgalyada, waxaana uu tilmaamay maamul ahaan in ay soo dhaweynayaan dhaliilkasta oo loo soo jeediyo, hase ahaateen wuxuu intaas ku daray dhaliisha loo baahan yahay in ay noqoto mid wax dhisaysa ee aan dhibaato dalka iyo dadka toona u horseedayn.
Md. C/kaxiim Axmed Guuleed, waxaa uu ballan-qaaday dawladdu in ay gacansiinayso suxufiyiinta, taas oo uu ku sheegay in ay noqon doonto mid aqoontooda iyo xirfadooda shaqaba kor loogu qaadi doono, waxaana uu ka codsaday bahda warbaahinta in ay bulshada ku hagaan waddada toosan ee hormarka iyo nabadda.
Waa markiii ugu horraysay oo wasiirka C.xakiim Axmed Guuleed uu sidaan oo kale o soo booqdo xarumaha warbaahinta tan iyo markii loo magacaabay xilka warfaafinta Puntland.
Farxaan Jeemis Cabdulle,
Dahabshiil oo bank cusub oo caalami ah ka furtay Bossaso.
M/weyne Faroole oo Adis Ababa kula kulmay M/weyne Shariif & Mesfin, wasiirka arrimaha dibedda ee Ethiopia.